China ụlọ ọrụ ngwa ngwa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Zhenyuan
1. Ihe dị elu na ike dị arọ
Nchara ahụ nwere ike dị elu na nke na-agbanwe agbanwe. Ejikọtara ya na ihe na osisi, njupụta nke njupụta ya iji nye ike dị obere, yabụ n'okpuru otu nrụgide ahụ, nchara nchara nwere obere ngalaba, ọkụ nwụrụ anwụ, ọ dị mfe ibufe ma wụnye , kwesịrị ekwesị maka ihe owuwu ahụ na nnukwu oge, ogologo dị elu na ibu dị arọ.
2, ígwè ike, ezi plasticity, ihe Ime Otu, elu bughi pụrụ ịdabere
Ọ dị mma maka mmetụta na-ebugharị na ibu ọrụ dị ike ma nwee arụmọrụ dị egwu. Ihe eji arụ ọrụ nke ígwè bụ nke edo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isotropic.The arụmọrụ arụmọrụ nke nchara ígwè kwekọrọ na ngụkọta oge ngụkọta.
3, Nkechiimepụta ụlọ ọrụ teel na ntinye nke igwe dị elu
Steel bughi òtù dị mfe na-ezukọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na na site.Factory mechanized n'ichepụta ígwè bughi structural components okokụre elu kpọmkwem, elu mmepụta arụmọrụ, saịtị nzukọ ọsọ, obere oge limit.Steel Ọdịdị bụ otu n'ime ihe ndị kasị mepere emepe owuwu.
4. Ezi akara arụmọrụ nke ígwè Ọdịdị
Ebe ọ bụ na a ga-emechi usoro a na-agbanye ọkụ, a ga-eme ya ka ọ bụrụ arịa ikuku dị elu site na ikuku ikuku na ikuku mmiri, nnukwu ọdọ mmiri, ọkpọkọ nrụgide, wdg.
5, nchara Ọdịdị okpomọkụ na-eguzogide ọkụ adịghị eguzogide
Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 150 ℃, ngwongwo nchara na-agbanwe obere obere. Ya mere, nhazi ígwè ahụ kwesịrị ekwesị maka ụlọ ahịa na-ekpo ọkụ, mana mgbe etinyere ihe owuwu ahụ ọkụ ọkụ nke ihe dị ka 150 ℃, efere mkpuchi ọkụ kwesịrị A ga-eji ya kpuchido ya. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 300 ℃ na 400 ℃ .Agbaji siri ike na nke mgbanwe na-ebelata nke ukwuu, na ike nchara ahụ na-adịkarị efu mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dị ka 600 ℃ .N'ụlọ ndị nwere ihe nchebe ọkụ pụrụ iche chọrọ, ihe owuwu ígwè aghaghi ichota ya site na ihe ndi ozo iji meziwanye oku oku.
6. Nguzo na-adịghị mma nke nchara ígwè
Karịsịa na iru mmiri na corrosive ajụ gburugburu ebe obibi, mfe rust.General ígwè Ọdịdị na nchara, galvanized ma ọ bụ agba, na mgbe nile ጥገና.For offshore n'elu ikpo okwu owuwu na seawater, pụrụ iche jikoro dị ka "zinc ngọngọ anodic nchedo" ga-adiaha iji gbochie corrosion.
7. Carbon dị ala, ike nchekwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na reusable
Mbibi nke ihe owuwu ígwè na-emepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị ihe mkpofu ihe na ígwè nwere ike imegharị ya.
Ekwesịrị ịmụọ igwe dị elu iji meziwanye ike mkpụrụ osisi na-arụ ọrụ nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị ngalaba ọhụụ, dịka ngalaba H (nke a makwaara dị ka akụkụ flange dị obosara) na mpempe akwụkwọ T na nke nwere ụdị, kwesịrị ịpịkọta iji gboo mkpa nke ogologo oge na nnukwu ụlọ.
The ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-eji na nnukwu-adịru ulo oru noo, nchekwa oyi, ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ ụlọ, n'ụlọ nkwakọba, nnukwu kol Sheds, ojii ụlọ, ụlọ ahịa mall, ngosi slọ Nzukọ, mgbatị, ngosi emmepe, elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè na ndị ọzọ na ulo oru ụlọ ọrụ ọha .......
Oyi nchekwa oyi yinye center
Ihe oru ngo a di na Yunnan, China
Auto 4S ụlọ ahịa
Ihe oru ngo a di na Dali, Yunnan Province
Restaurantlọ oriri na ọcoụcoụ ebe obibi
Ihe oru ngo a di na Lijiang, Yunnan
Projectlọ ọrụ ngo
Ihe oru a di na Wa steeti Myanmar
Buildingslọ ụlọ ọrụ
Ọrụ a dị na Tachilek, Mianmaa
Nke gara aga: Ngosipụta nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ
Osote: Ngwongwo Ogwe osisi